आर्थिक क्रान्तिका अभियन्ता भट्टराईलाई अभिवादन ! | मझेरी डट कम
आर्थिक क्रान्तिका अभियन्ता भट्टराईलाई अभिवादन !
kbs — Thu, 04/01/2010 - 20:32
श्रद्धेय पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यू,
जन अपेक्षाका क्षेत्र सम्बोधनका लागि लाल अभिवादन !
औपचारिक भाषामा अल्झेर मन खुम्च्याई, खुम्च्याई शब्द ओकल्ने पक्षमा म छैन । राजनीतिज्ञ तथा साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला साहित्यमा भने सम्राट पनि नाङ्गै हुन्छ, साहित्य अराजक हुन्छ भन्थे रे । यस मानेमा म पनि उनैको अनुयायी हुँ । आइतबार नपर्खीकन सरासर शब्दहरूको पहाड बनाउने काम गर्ने बानी छ । आफ्नो मन खाएकाहरूसँग भलाकुसारी गर्ने मेरो मनोकांक्षा हो । नेपालको आर्थिक क्रान्तिका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोण सहितका अर्थमन्त्री भएको पाएकाले ‘आर्थिक क्रान्तिका अभियन्ता बाबुराम भट्टराई’ भनेको हुँ । ‘भट्टराईले जे बोल्यो त्यसमा अडिग भएर लाग्यो, पूरा गर्न सकिने बोली बोल्ने र फत्ते गर्न कटिबद्ध रहने कोही राजनीतिज्ञ छ भने त्यो भट्टराई बाहेक अर्को नेपालमा विरलै छ’ भन्ने कुरा सर्वत्र गरिएको पाएँ । मेरो मनको यसै कुरालाई पूरा गर्न कलम उठाएको छु । कलमले जेजे भन्छ, मेरो मनले पनि त्यही, त्यही भनेको हुन्छ । कलम मार्फत् खोट हुने गरी चोट पर्न पुगेमा क्षमा याचना माग्दै निर्धक्कका साथ कलमी म्याराथुनमा भाग लिन अनुमति चाहन्छु ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, हामीमा कस्तो पागलपन छ भन्ने बारेमा लेख्दछु । जाँतोले अन्न पिसिदिएर हामीलाई गुण लगाएको हुन्छ र पनि ढुंगालाई पुज्न कहाँकहाँ पुग्छौँ तर आफ्नै घरको जाँतोलाई पुज्दैनौँ । त्यो ऋणलाई भुसुक्कै भुलिदिन्छौँ । गुण दिनेको गुणगान गाउनु महानता हो । त्यो कार्य पनि महान् तरिकाले हुँदा मात्र सही अर्थमा गुणगान गरेको ठहर्छ । अनवरतरूपमा दशवर्षसम्म जनयुद्ध लडेर विश्वले नै पाठ पढ्ने काम गर्दा पनि नेपालका केही राजनीतिज्ञ भनाउँदाहरूले बन्दै गरेको संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई स्थान दिन आपत्ति जनाएको सुन्न पाउँदा मेरा कान पाकेका छन् । आमूल परिवर्तनको संवाहक जनयुद्धलाई जाँतोलाईझैँ व्यवहार गरेको पाउँदा रगत बगाएका, ज्यान दान दिएका लालयोद्धाहरूको रगतले नसराप्ला र ? अब पनि जनताले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा राहत नपाएमा मन नरोला र ? तसर्थ आज म तपाईसँग जनसरोकारको आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्दै छु ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, ‘डब्लुडब्लुडब्लु डट बाबुराम भट्टराई डट कम’ले मलाई यो पत्र लेख्ने फुर्ती दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयलाई जनमुखी तवरले हाँक्ने काम गर्नुभएको मूल्याङ्कन गरेर नै कलम चलाउने हिम्मत जुटाएको हुँ । अब क्रान्ति, त्यसमा पनि आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरौँ । क्रान्ति शब्द सुन्नासाथ हामी झस्कन्छौँ । बम–बन्दुक, गोला–बारुद जस्ता शस्त्रअशस्त्रको बलले गर्ने ‘कि बाँच कि मर’को खेल नै क्रान्ति हो भन्ने भ्रममा हामी पुगेका छौँ । भ्रमबाट हामी उम्कन त चाहन्छौँ तर हिम्मत जुटाउन सकेका छैनौँ । निश्चय नै, हामी भाषणका भोका छौँ, किनकि हामीसँग चेतनाको कमी छ । निश्चय नै नवीन सोचको भाषणले चेतना दिन्छ तर भोको पेट र नाङ्गो आङ लिएर भाषण सुन्न सकिन्न । आश्वासनका पोकापन्तेरा बोकेर जीवनको उकालो चढ्न सकिन्न, ओरालो झर्न सकिन्न । जीवन रहे मात्र सार्थक बनाउन सकिन्छ । नरहे प्रश्न नै आउँदैन । आजको आवश्यकता भनेको ‘जीवन बचाऊ, सुखी बन, परिवार सुखी तुल्याऊ, समाज र राष्ट्रको समुन्नतिमा सानो भए पनि योगदान गर’ भन्ने हो । यसका लागि आजका युवाले नौलो सोचले ओतप्रोत हुँदै नौलो तवरले पाइला चाल्नु आवश्यक छ । अबको क्रान्ति विचारले, सोचले, दृष्टिकोणले, तत्कालै उँभो लगाउने पाराले हुनुपर्छ । देशमा एउटा विशाल जमात भोकमरीमा छ, विदेशीन वाध्य छ । स्वदेशमा स्वाभिमानी शिर उच्च पार्ने मान्छे, विदेशी भूमिमा भतुवाकुकुर सरह भएर दुई पैसा कमाउन वाध्य छ । सम्झँदैमा आङ्ग जिरिङ्ग हुन्छ । स्वाभिमानी खुन उम्लिन थाल्छ । स्वदेशमा छँदा आफूले खाएको थाल नमाझ्ने मान्छे विदेशी भूमिमा पराइको असली सेवकका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु परेको छ । जुन भूमिलाई प्रकृतिले ठगेको छ, त्यसलाई त ठीकै छ, कमाउनु उसको वाध्य हो । सेवा गर्ने ठाउँ आफ्नोमा छैन भने अर्कामा निर्भर हुनु भनेको नौलो कुरा होइन । तर प्राकृतिक सम्पदाले धनी हाम्रो देश नेपालका हामी नेपाली किन दरिद्र भएका त ? उत्तर एउटै हो– रोजगार नपाएर । काम नपाएपछि माम मिलेन, माम नमिलेपछि, ज्यान बचेन । ज्यान बचाउनै पनि स्वाभिमान विक्री गर्नपट्टि लागेका छौँ हामी । धनी देशका गरिब जनता भएर बाँच्दा पनि ठीक्कै छ, बाबुबाजेको धर्म थामिएकै छ भन्ने चिन्तन गछौँ । युग जति छिप्पिए पनि हाम्रो मानसिकता एकदमै कलिलो रहिरहेको छ । हामीले मानसिकता छिप्याउन चाहेका छैनौँ । यसलाई दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । यस दुर्भाग्यबाट बच्न राजनैतिक आग्रह, पूर्वाग्रह छाडेर, जातपात, धनीगरिव त्यागेर थोरै अर्थका साथ सबै युवा एक थलोमा उभिनु परेको छ । आफ्नै हातको सानो रकमले मुलुकलाई उचाल्नु परेको छ । अझ उद्यम गर्ने हिम्मत भएका, पाखुरीमा बल भएका, नवीन तवरले नवीन पाराले हिँड्ने सोच भएका युवाहरूले उद्यम गरी स्वरोजगार बनून् भन्ने महान् उद्देश्य लिई सुरु गरिएको ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ लाई जन्म त दिनुभयो तर हुर्काउन, फैलाउन र स्थापित गराउन सक्नुभएन । नेपालको स्वार्थी राजनीतिको तारो बन्यो ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ । कुर्सी बदलिँदैमा ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ हरायो, विलायो र लाखौँ बेरोजगार युवाहरूको मनोकांक्षामा कुठाराघात भयो ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, लाखौँ बेरोजगार युवाहरूको मनोकांक्षालाई सम्बोधन सरकारी तवरबाट हैन, निजी क्षेत्रबाट पनि, व्यक्ति, व्यक्तिको पहलबाट पनि हुन सक्छ भन्ने अवधारणा लागू भइसकेको छ, जुन कुरालाई पुष्टि गर्न केही शब्दहरू खर्चदै छु । हामीले आँखा बन्द नगरीकन काम गर्नुपर्छ । शारीरिक कष्ट खेपेर भए पनि प्रतिफलसहितको सुन्दर भविष्यको लागि काम गर्न, त्याग गर्न, श्रम लगानी हिच्किचाउनु हुन्न । हैन, शारीरिक कष्ट नगरौँला तर थोरै लगानी गरेर हाँसीहाँसी प्रतिफलसहितको सुन्दर भविष्यको प्रशंसा त गर्न सक्छौँ । हामी जहाँ जान्छौँ, त्यहाँ चेतना छर्न सक्छौँ । आफूमा छैन भने चेतना लिन सक्छौँ । राम्रो कुरा भन्नु, असल नियत जगाउनु र राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विगुल फुक्नु नै देशका निम्ति हाम्रो दण्डवत् हो । अन्य कुनै जटिल साधनामा लाग्न नसके पनि सही तर सरल, सहज र आदर्श तवरले मुलुकको समुन्नतिमा कोशेढुंगा हुने काममा आजको युवापिँढी एकोहोरिनु आवश्यक भइसकेको छ । चोट सहेर ढुंगो त मूर्ति बन्छ र पुजिन्छ । हामी त मान्छे पो हौँ त । आफू मात्र उक्सिन खोज्दा, अरूलाई पछि पारेर आफू मात्र अघि बढ्न खोज्दा हामी एक्लो भयौँ र पछि पर्यौँ । अरूलाई अघि बढाएर हामी पनि अघि बढ्ने हिम्मत गर्ने स्वभाव हामीमा हुँदो हो त धेरै अघि नै हामी जापानका गुरु बन्न सक्ने थियौँ । यसका लागि विचारले महान् बनेझैँ कामले महान् बन्ने चाहना मनमा हुनुपर्छ । जसरी हामी जन्मदा मृत्युलाई साथै लिएर जन्मन्छौँ, त्यसरी नै समस्या जन्मदा समाधान लिएर जन्मने गर्दछ । समस्या हेरेर भाग्नु कायरता हो, समस्याको जरो खोज्नु महानता हो । पछ्यौटेको दास हैन, अग्रगामीको सेवक बन्दा हामी संसारलाई जित्न सक्छौँ । हाम्रै व्यवहार सत्रु पनि हो र मित्र पनि हो । हामी हैसियतअनुरूपको जे कल्पना गर्छौँ, जे इच्छा राख्छौँ, त्यही पाउँछौँ । आफ्नो अवस्था अनुकूल, अरूलाई हेर्ने नजर बनाएमा हामीले कहिल्यै असफलतालाई सहनुपर्दैन । सफलता पाउमा पर्न आउँछ । संसार खेल मैदान हो । हामी खेल जित्न मैदानमा उत्रेका छौँ । जीवन व्यापार हो । हामी व्यापार गर्न संसारमा उत्रेका हौँ । सही नाफाको खोजीमा हामी छौँ । राष्ट्र उँभो लाग्ने व्यापार गर्न सके हामी उद्यमी हुन्छौँ, अरूको प्रगतिमा जल्न थाले राष्ट्रकै गद्दार कहलिन्छौँ । लगाम विनाको घोडा जतासुकै लहसिन सक्छ, अल्झिन सक्छ । त्यस्तै लक्ष्य नै हाम्रो लगाम हो । यो विना हामी पनि हराउन सक्छौँ । सम्मानको जीवन बनाउन सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, नजाने सिक्नुपर्छ । खोक्रो आदर्श र फुस्रो भाषणले रासन दिँदैन । अतः रासन सहितको आदर्श र भाषणको चाह हुनुपर्छ । जीवनको उचाइ महान् सोच र विचारले पैदा गर्छ । हामी जापान, अमेरिका, वेलायतहरूलाई त चिन्छौँ तर आफूले आफैँलाई चिन्दैनौँ । अब नेपाल र नेपालीलाई चिन्नेतिर ध्यान खिचिन परेको छ । यसका लागि सुरुमा एक्लो प्रयास पनि, एक्लो सोच पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ तर गन्तव्यमा पुग्न भने काफी हुँदैन । तसर्थ सम्पूर्ण युवाहरूको होस सहितको जोसको खाँचो पर्छ । युवावर्गको एकता एक ठाम हुन सके मुलुकमा आमूल आर्थिक क्रान्ति हुन हामीले कुनै विदेशीहरूको मुख ताक्नुपर्दैन । आर्थिक विकासको मूल प्रत्येक नेपालीहरूको पाखुरीले, दिमाखले र परिश्रमले फुट्न सक्छ ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, अब हामी कस्तो अबस्थामा छौँ त भनेर घोरिन मन लाग्यो । हामी नक्कल गर्न पारंगत छौँ । हाम्रो चालचलन नक्कले छ । आँखा बन्द गरेर हामी नक्कल गछौँ । कान बन्द गरेर हामी नक्कल गछौँ । मन र तन बन्द गरेर हामी नक्कल गछौँ । मात्र नक्कल । त्यो पनि राम्रो कुराको नक्कल भएको भए त हुन्थ्यो नि । अरूले मीठो खायो, राम्रो लायो, श्रृङ्गार गर्यो, ठूलाठूला कुरा गर्यो त्यसलाई शिरोधार्य गरिहाल्छौँ । तर अरूले बोलेअनुसार काम गर्यो, त्यसको नक्कल गर्न हामीसँग गिदी छैन । अरूले उँभो लाग्ने काम गर्यो, त्यसको सिको गर्न हामी भुसुक्कै भुल्छौँ । समग्रमा भन्दा राम्रो कुरो, अग्रगतिको कुरो चाहिँ भुसुक्क भुल्छौँ । पुंग न पुच्छरको कुरोमा दिमाख लगाइरहन्छौँ । कसैले नयाँ काम कुरो गर्न खोज्यो भने अविश्वासी नजरले हेर्छौँ । आशंकाको नजरले हेर्छौँ । आफू उठ्न सक्दैनौँ । अरू उठेको पनि सहन सक्दैनौँ । आफू अघि बढ्नुको सट्टा अघि बढेकाहरूको खुट्टा तान्न पनि पछि पर्दैनौँ । न्वारानदेखिको बल झिकेर काम गर्छौँ । सानोतिनो प्रलोभनको दास भएर क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँने अभियानबाट जीवनलाई निकालिदिन्छौँ । विकारयुक्त मानसिकताले हामी पछि छौँ । पछि रहनुमै सन्तोष ठान्छौँ । यही प्रवृतिले हामी पछिको पछि छौँ । यही बानीले गर्दा धनी मुलुकका गरिब जनता भएका थियौँ, आजसम्म भई नै रहेका छौँ । भोलि हुन नपरोस् भनी आज सोचिरहेका छौँ । सोच्नु मात्र हैन, काम गरेर देखाउने बेला गुम्न लागिसक्यो ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, हामीले के गर्नु छ त ? अनेकतामा एकता खोज्नुछ । असमानताभित्रै समानता छुट्याउनुछ । आफू जे सोचिन्छ, त्यही बन्नुछ । आफूले चाहे अनुसारको जीवन व्यतित गर्नुछ । एक्लो व्यक्तिको गतिलो सोचले विश्व हल्लाउन सक्छ भन्ने बुझ्नुछ । हाम्रो पुरानो, थोत्रो पाराको सोचाइ परिवर्तन हुन आकांक्षा परिवर्तन हुनुपर्छ । आकांक्षा परिवर्तन हुन विश्वास परिवर्तन हुनुपर्छ । विश्वास परिवर्तन हुन दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ । दृष्टिकोण परिवर्तन हुन व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ । व्यवहार परिवर्तन हुन चरित्र परिवर्तन हुनुपर्छ । यसो गर्नसके जीवनमा नै क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छ । यसो गर्न हामी स्वयम् सक्षम छौँ । हामी जे चाहन्छौँ, त्यही गर्न सक्छौँ । जब हामी समुद्रमा डुबुल्की लगाउने जमर्को गर्छौँ भने अवश्य मोती लिएर फर्कन्छौँ । अर्काको खुट्टा तान्नमा वा माथिदेखि तलतिर ठेल्नमा लाग्छौँ भने आफू समेत दलदलमा फस्छौँ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । तल परेकालाई माथितिर तान्ने र माथि पुगेकालाई अझ माथितिरै ठेल्ने काम गर्नुपरेको छ । यदि हामी संसार बदल्न खोज्दै छौँ भने स्वयम् आफू बदलिएर देखाउनुपर्छ । अरूले के दिन्छ भनेर आसे जीवन विताउन खोज्नु मूर्खतापूर्ण जीवन हुन्छ । मैले अरूलाई के दिन सकेँ भन्नु युक्तिपूर्ण हुन्छ । यी सम्पूर्ण कुराहरू आजका युवाहरूको मगजमा घुस्न आवश्यक छ ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, आजका युवाहरू सक्षम भए भने देश सक्षम हुन्छ । आजका जयपुरी घर्तीहरू, आजका रामकुमारी भाँक्रीहरू, आजका गगन थापाहरू, आजका वर्षमान पुनहरू, आजका दीपेन्द्र चौधरीहरू, आजका चन्दन यादवहरू सक्षम भए र हुँदै गए भने भोलि पम्फा भुसालहरूको, भोलि झलनाथ खनालहरूको, भोलि शेरबहादुर देउवाहरूको, भोलि बाबुराम भट्टराईहरूको, भोलि उपेन्द्र यादवहरूको, भोलि महन्थ ठाकुरहरूको, भोलि नरहरि आचार्यहरूको अभाव खड्किएर देश सिकिस्त हुने छैन । यिनै जयपुरी घर्तीहरू, रामकुमारी भाँक्रीहरू, गगन थापाहरू, वर्षमान पुनहरू, दीपेन्द्र चौधरीहरू, चन्दन यादवहरू सक्षम भएर देश हाँक्नेछन् । आजका अग्रजहरूको ठाउँ रिक्त नहोस्, आजका युवाहरूले नै पूर्ति गरून् भन्ने हो भने युवायुवा बीच एकताबद्ध क्रान्तिको आवश्यकता छ, आर्थिक क्रान्तिमा लामबद्ध हुनु आवश्यक छ । क्रान्तिका नाममा भ्रान्ति पैदा हुने काम भइरहेको छ । समस्याको विशाल खाडल बनेको छ, जन्मदै टाउकामा ऋण लिएर जन्मनु परेको छ र ऋण नतिरी, ऋणै बोकेर मर्नुपरेको छ । अतः आर्थिक क्रान्ति ल्याउन, अवरोधक खाडल पुर्न युनिटी लाइफ इन्टर नेशनल लिमिटेड नेपाली माटोमा ६ वर्ष पहिले जन्मेको भेटियो । ‘जे उपलब्ध साधन र श्रोत छ, त्यसकै सही तवरले उपयोग गर्नुहोस्, दाम हात पर्छ । सहयोगी हात युनिटी लाइफ इन्टर नेशनल कम्पनीको छ’ भन्दो रहेछ । हात बाँध्नुहोस्, मुख बन्द गर्नुहोस्, कानमा ठेडी कोच्नुहोस्, आँखामा पट्टी कस्नुहोस्, आफूमा आफैँ हराइन्छ । आफूलाई आफैँ चिन्न सकिन्न । अहिलेसम्म हामीले यही र यस्तै गर्दै आयौँ । र त हामी पछ्यौटे रोगले पीडित छौँ । संसार हाँसेर जिउँनेहरूलाई स्वागत गरिरहन्छ । संसारमा हाँसेर जिउँनेहरूकै जित हुन्छ । सबै जना एक ठाम भए हाँस्न सकिन्छ, आर्थिक, वैचारिक जस्ता हरेक दृष्टिकोणले अघि बढ्न सकिन्छ । एक जना, दुई जना गर्दै उठ्दै गए, आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, हुन्छ । आर्थिक क्रान्तिका योद्धा, सहयोद्धाहरू थपिँदै जान्छन् ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, एक पटक यता हेरौँ त । आँखाले भन्छ– मलाई सुन्दर दृष्य चाहिन्छ । कानले भन्छ– मलाई मधुर संगीत चाहिन्छ । संगीतले भन्छ– मलाई सुनिदिने गजवको मान्छे चाहिन्छ । मान्छेले भन्छ– मलाई रहँन सुन्दर पृथ्वी चाहिन्छ । पृथ्वीले भन्छ– मलाई सुन्दर आकाश चाहिन्छ । आकाशले भन्छ– मलाई दुई सुन्दर चन्द्र–सूर्य चाहिन्छ । त्यस्तै देशले भन्छ– मलाई सुन्दर पार्न आजका युवाहरूको एकता र सहभागिता, जोश र होस् चाहिन्छ । यसका लागि एउटा जमघट हुने केन्द्र चाहिन्छ । त्यही केन्द्रको रूपमा युनिटीलाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको सन्देश लिएर हिँडेको, सबै वर्गको सहभागितामा आर्थिक क्रान्तिको विगुल फुक्दै हिँडेको भेटियो । यसले कस्ता नीति ल्याएको छ त ? यस बारे एक क्षण घोत्लिँदै छु । नेपाललाई इन्धनमा आत्मनिर्भर पार्ने अभियान स्वरूप संजिवन खेतीको सुरुवात गर्नु आफैँमा एक युगान्तकारी पाटो हो । ग्रामीण विकास, वातावरण संरक्षण र ऊर्जा सुरक्षाको सारथी संजिवनी अति रुखो, सुख्खा, पाखो तथा खेर गएको जमीन र अन्य वाली फस्टाउन नसक्ने जग्गामा पनि खेती हुन्छ । भू–क्षय रोकथाम, नदी कटान नियन्त्रण तथा प्राकृतिक जैविक बारको लागि अत्यन्त उपयोगी छ । यसको दानामा तेलको प्रतिशत ३७.५ भन्दा बढी छ । यसको पीना जैविक मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मिश्रित खेती लगाएर अन्य बालीबाट पनि पर्याप्त फाइदा लिन सकिन्छ । यसको खेती वीउ तथा हागाँ कटिङ्गबाट सजिलै गर्न सकिन्छ । नगन्य, पूँजी र श्रमको लगानीमा उच्च प्रतिफल पाइन्छ । एक चोटि रोपिसकेपछि ५० बर्षसम्म लगातार फल दिइरहन्छ । यस्तै विशेषताले युक्त संजिवनी खेती मात्र गरेमा पनि हाम्रो आर्थिक हैसियत उकासिने रहेछ । रोजगारी पनि पाइनेरहेछ । उत्पादित संजिवनको बजार व्यवस्थापन गर्ने काम लिमिटेडले नै गर्ने भएको छ । हाम्रै झाडीमा तेल छ भने हामी किन खाडी मुलुकमा निर्भर रहने ? सधैँ पैसा तिरेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्न सकिन्न तर एक पटक तिरे पछि जीवन भर स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ भने किन पछि पर्ने ? एक पटक जीवनविमामा केही रकम लगानी गरेपछि जीवन नै विमित हुन्छ भने हामी चाहिँ किन पछि पर्ने ? एक पटक शिक्षामा लगानी गरेपछि एक निश्चित स्तरसम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न मिल्छ भने किन मन नदिने ? बजारभाउ घटबढको मारले उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन्, डिपार्टमेण्टल स्टोर मार्फत् उपभोग्य समानहरू सुफत मूल्यमा जनताकहाँ पुग्छ भने के चाहियो ? बजार नपाएर उत्पादित वस्तु खपत हुन नसकेको अवस्थामा कृषि डिपोमार्फत् देशभरिका समानहरू देश भरि नै फिँजिन्छन् भने अर्को कस्तो राहत चाहियो ? मेरो मनमा यिनै गन्थनहरू मडारिइरहेछन् । सरकारले पूरा गर्न नसकेका र सरकारी ध्यान नपुगेका जनसरोकारका विषयहरूमा, क्षेत्रहरूमा एउटा कम्पनीको ध्यान पुगेको भेटेको छु । ध्यानअनुसार काम पूर्णतः पूरा नभएको भए पनि भइरहेको भेटेको छु । मेरो मनमा अझै धेरै अविश्वासका कुराहरू मडारिइरहेका छन् । शतप्रतिशत जान्ने, बुझ्ने ध्याउन्नमा छु । हजुरले पनि यी मैले माथि संकेत गरेका कुराहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी भावी अर्थनीतिका बारेमा हामी जनतालाई चनाखो पार्दिनुहुन्छ भन्ने चाहनाका साथ यो पत्र कोरेको हुँ ।
श्रद्धेय बाबुराम भट्टराईज्यू, समग्रमा भन्नु पर्दा, आजका युवाहरूको मगजबाट स्वार्थी राजनीतिप्रतिको राग हटाइनु आवश्यक छ । नेपालको स्वार्थी राजनीतिले नेपाल र नेपालीलाई नै खाइरहेको छ । ‘राजनीतिको अर्थ हो अर्कोमाथि विजय पाउनु । जहाँ अरूमाथि विजय पाउनु छ, त्यहाँ सत्यको कुनै प्रयोजन हुँदैन । त्यसैले राजनीतिमा सत्यले कहिल्यै विजय प्राप्त गर्दैन । राजनीति सत्यको जगमा हुँदैन । जुन दिन राजनीतिमा सत्यको विजय हुन थाल्नेछ त्यस दिन खासमा राजनीति खासमा राजनीति नै रहने छैन । राजनीतिको गुणवेत्ता नै अर्कै हुनेछ । राजनीतिमा भंगवक्ता हुनेछ । मलाई लाग्छ, त्यसै दिन राजनीतिको बिदाइ हुनेछ । राजनीति धर्ममा रूपान्तरण हुनेछ ।’ भन्ने दार्शनिक ओशोको भनाइले समेत त्यही कुरामा जोड दिन्छ । उनकै शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा राजनीतिलाई धर्ममा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । आजका युवाहरूको मगजमा मुलुकको हितमा सहभागी हुने र आफ्नो आर्थिक हैसियत बलियो बनाउने सोच आउनु आवश्यक छ । कमायो गुमायो हैन, कमायो बढायोमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ । समाजमा मौलाउँदै गएको अराजकता, अशान्ति, राजनैतिक अस्थिरता र वैमनस्यताले मानवीय संवेदना नै ह्रास भइरहेको छ । आजको युगमा मान्छे आफूभित्रको सत्रुबाट भागिरहेको, अत्तालिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन एकतावद्ध आर्थिक क्रान्तिमा जुट्नु आजका युवाहरूको परम कर्तव्य हो । आर्थिक क्रान्तिमा लामबद्ध क्रान्तिकारी युवाहरूलाई ठोस ज्ञान दिन यहाँले कलम र बोलीमार्फत् पनि तत्कालै ठोस पहल गर्नुहुनेछ भन्ने यस कलमको अपेक्षा राख्दै पत्रान्त गर्दछु, धन्यवाद, अभिवादन !
हाल ः लिट्ल फ्लावर मा.वि., राजविराज–९, सप्तरी,
फोन न.ं ०३१५२००३८ सम्पर्क ः मो नं. ९८४२८२९२०६
दिनाङ्क ः ०६६।१२।१८
यस लेखमा प्रकाशित विचारहरू लेखकका नितान्त व्यक्तिगत बिचार हुन््।
chahe lekhak ka nitanta
अतिथि — Wed, 04/07/2010 - 15:10
chahe lekhak ka nitanta byaktigat kura hos chahe majheriko. je hos nandalal g lai mannai par6. thanks nandu g.
from today i am ur
अतिथि — Sun, 06/06/2010 - 16:53
from today i am ur fan........................... lovely thoghts
दिनहुँ बेहुली झैं
शुल जस्तै बिझ्यो
अंग्रेजी र अर्धसत्य
फूलको थुँगा टिपेर तिमी शिरमा सजाऊ
धेरै भयो मैले अचेल
तिमी नै मेरो
वनवासका अनुभूतिः संक्षिप्त परिचय
थाहा पाएँ, चाल् पाएँ
शिल्पका् समुदाय छगु म्हसीका
फगत एक नजरमा ..हरिप्रसाद रिमाल
अब तिम्रो आफ्नु पनि कथा लेख
बैंसालु रारा र कान्तिहीन मुगाली